Owayeqeqesha iPirates ohlwini lwabagaqele umsebenzi kwelePSL | News24
Owayeqeqesha iPirates ohlwini lwabagaqele umsebenzi kwelePSL
Cape Town – Lowo owayengumqeqeshi we-Orlando Pirates, uRuud Krol, usohlwini lwabaqeqeshi okuzokhethwa kubo umqeqeshi omusha weCape Town City, lokhu kudalulwe ngumnikazi waleli qembu, uJohn Comitis.
Lo mqeqeshi owayeqeqesha aMabhakabhaka kuthiwa ubonakale eKapa ngemuva nje kokuvela kwezindaba zokuthi u-Eric Tinkler usesulile kule kilabhu egijima kuPremiership – njengoba egcine esejoyine iSuperSport United.
OLUNYE UDABA:IChiefs inqamule inkontileka yomsizi kamqeqeshi
Yize noma uComitis evumile ukuthi uthole inqwaba yezicelo zomsebenzi, uKrol kubikwa ukuthi uyena oseqhulwini kwabazothola lo msebenzi.
Lo mqeqeshi oneminyaka engu-68 ubudala, nowaholela amaBuccaneers ekutheni athathe isicoco seligi kanye nezicoco ezintathu ngonyaka ka-2011, useqeqeshe iCS Sfaxien, eTunisia, i-Esperance de Tunis, i-Al-Ahli Tripoli, kanye naseRaja Club Athletic futhi wagcina ukuqeqesha iClub Africain.
“Sesithole inqwaba yezicelo,” uComitis usho kanjalo njengoba ecashunwe yi-website yeKickOff.
“Yena (uKrol) ungomunye wabaqeqeshi kodwa sinezindlela eziningi futhi sizokwenza isimemezelo cishe ngesonto elizayo.”